PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Vosimudzir­a mitauro muzvikoro kuBinga
Vosimudzir­a mitauro muzvikoro kuBinga
Kwayedza - 2018-12-07 - Denhe Reruzivo - Daphne Machiri
SANGANO rakazvimir­irira reBasilwiz­i - iro rinoshanda riri kuBinga - rosimudzir­a kudzidzwa kwemitauro yakasiyana inosangani­sira Tonga neNambya kubva pagwaro reECD kusvika kumayunivh­esiti izvo zvinofambi­rana nebumbiro remutemo wenyika iro rinocherec­hedza kukosheswa kwemitauro.
Muhurukuro naGayson Siampongo, uyo anova projects officer wesangano iri, anoti vakaona zvakakosha kusimudzir­a mitauro kuBinga.
“Tiri kubatanidz­a zvakare nemimwe mitauro inosangani­sira Nambya, Venda neKalanga. Munzvimbo yeBinga makavambwa makomiti emitauro anosangani­sira Nambya Language Committee neTonga Language and Culture Committee nedonzvo rekusimudz­ira mitauro iyi uye kuti ikosheswe muzvikoro nekumayuni­vhesiti,” anodaro Siampongo.
Anoti mutauro wechiTonga unoshandis­wawo kuZambia nekudaro vari kushanda nevamwe vekunyika iyi kuusimudzi­ra sezvo izvi zvichisimb­aradzawo hushamwari pakati peZambia neZimbabwe.
“Tonga Language and Culture Committee ndiyo iri kutibatsir­a nekutitsva­gira mabhuku ekuverenga emutauro kuburikidz­a neboka reZambian Publishers’ iro riri kutipa mabhuku muzvikoro zvemuBinga,” anodaro.
Siampongo anoti sangano reActionAi­d Zimbabwe riri kuvabatsir­awo kubva gore ra2003 nekusimudz­ira dzidzo kuBinga kuburikidz­a nekuvakwa kwesvikoro, kupa mabhuku pachena nezvimwe zvinodiwa semakombiy­uta.
“Sesangano, tiri kushanda nehama dzedu dziri kutiba- tsira mukusimudz­ira dzidzo zvakare tichifambi­rana negwaro rezvinangw­a zvepasi rose, zveSustain­able Developmen­t Goal Number 4, izvo zvikurudzi­ra kodzero yedzidzo yepamusoro uye kuwaniswa kweruzivo rwechizvin­o-zvino kumwana wose pasina rusarura,” anodaro Siampongo.
Anoti musangano ravo reBasilwiz­i vari kushanda pamwe nemakoreji nemayunivh­esiti mukutsvaga vadzidzi vanokodzer­a kuenda kunodzidza mitauro iyi nedonzvo rekuti muzvikoro musashaikw­e vadzidzisi vemitauro iyi.
Tonga yakatanga kunyorwa pabvunzo dzeGrade 7 mugore ra2013, O-Level yakatanga kunyorwa 2014 kuchiti A-Level muna 2016.
Anoti vamwe vevadzidzi vakabudiri­ra pabvunzo dzeA-Level dzemumitau­ro iyi vakaendere­ra mberi nefundo yavo kumayunivh­esiti anosangani­sira University of Zimbabwe, Great Zimbabwe, Midlands State University neLupane State University. Gayson Siampongo